Gandaki Sanchar » ‘अवतार’भन्दा ‘गोन विद दि विन्ड’को कमाइ बढी !
‘अवतार’भन्दा ‘गोन विद दि विन्ड’को कमाइ बढी !
जेम्स क्यामरनद्वारा निर्देशित ‘अवतार’लाई संसारमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने फिल्म मानिन्छ । सन् २००९ मा रिलिज भएको फिल्मले विश्वव्यापी रुपमा २ अर्ब ७८ करोड ७९ लाख डलर ग्रस कलेक्सन गरेको छ । यसमा डिभिडी बिक्री, अनलाइन बिक्री र टेलिभिजन राइट्सबाट आएको पैसा जोडिएको छैन ।
‘अवतार’लाई २४ करोड डलर खर्च गरेर निर्माण गरिएको थियो । लगभग लगानीको सय गुणा नै यसले कारोबार गरेको देखिन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि ‘अवतार’लाई सर्वाधिक कारोबार गर्ने फिल्म मान्न नसकिने तर्क पनि अर्कोथरीको छ ।
उनीहरु फिल्मको आर्जनलाई मुद्रास्फीतिको तराजुमा राखेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । मुद्रास्फीति अर्थात् कुनै पनि मुद्राको क्रय क्षमता कुनै निश्चित समयमा कति थियो, त्यो हेरिन्छ । ‘अवतार’ रिलिज हुँदाको वर्ष २००९ र अहिले २०१८ को मुद्रास्फीति समेत स्थीर छैन ।
मुद्रास्फीतिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने सन् १९३९ मा रिलिज भएको ‘गोन विद दि विन्ड’ सर्वाधिक ग्रस कलेक्सन गर्ने फिल्म हो । भिक्टर फ्लेमिङद्वारा निर्देशित उक्त फिल्मले त्यतिबेला ३९ करोड डलर कारोबार गरेको थियो ।
सन् २०१६ मा मुद्रास्फीतिका आधारमा सर्वाधिक कारोबार गर्ने फिल्मको सूची निकालिएको थियो । उक्त सूची अनुसार ‘गोन विद दि विन्ड’ले त्योबेला उठाएको ३९ करोड अहिलेको समयमा लगभग ३ अर्ब ६४ करोड डलर हुनपुग्छ । त्यस्तै सन् २००९ मा ‘अवतार’ले कमाएको २ अर्ब ७८ करोड डलर सन् २०१६ मा ३ अर्ब १९ करोड हुन आउँदो रहेछ ।
वस्तवमा यसैलाई सबैले वैज्ञानिक ढंगको सूची मानेका छन् । सन् २००९ मा भन्दा सन् १९३९ को टिकट मूल्य निकै थोरै थियो । यसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । सन् १९३९ तिर टिकटको मूल्य १ डलरको हाराहारीमा थियो भने ‘अवतार’को टिकट १४ डलरको दरले समेत बेचिएको थियो ।
गिनिज बुकमा समेत सर्वाधिक कारोबार गर्ने फिल्मका रुपमा ‘गोन विद दि विन्ड’ नै उल्लेख गरिएको छ । उसले पनि मुद्रास्फीतिका आधारमा फिल्मको कमाइलाई हालसाबिक गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘विश्वव्यापी उपभोक्ता मूल्य सूचांक’का आधारमा मुद्रास्फीतिको मिलान गरिन्छ ।
प्रकाशित मिति २० जेष्ठ २०७५, आईतवार ०४:४६